Budada Titanium Carbide, TiC - Goodao Technology Co., Ltd.
Budada Titanium carbide ee loo isticmaalo qalabka ku buufinta kuleylka kuleylka, qalabka alxanka, qalabka filimada adag, matoorrada duulimaadyada militariga ee carbide iyo cermet. Sida wax lagu daro soosaarida heerkulbeegyada, hagaaji iska caabbinta
Caanaha molecular TiC
Xeerka CAS 12070-08-5
Barta dhalaalida 3140'C
Cufnaanta 4. 930 g / ml
Isticmaala Budada carbide Titanium ee loo isticmaalo qalabka lagu buufiyo kuleylka kuleylka, qalabka alxanka, qalabka filimada adag, matenalscarbide iyo militariga duulista hawada. Adoo kudarsanaya soosaarida heerkulbeereyaasha, hagaaji daalka
1. Guryaha: biraha cawl dhalaalaya biraha cawl adag, adag, marka labaad oo keliya adkaanta dheeman,
magnetism daciif ah.
2. Cufnaanta (g / cm3,25 ℃): 4.93
4. Barta dhalaalka (℃): 3140
Bar kulaylka (℃, cadaadiska Hawada): 4820
6. Kala-miirnaanta: lagu milmi karo nitric acid iyo aqua regia, oo aan lagu milmi karin biyaha.
7. Mohs adkaanta: 9 ~ 10
8. Isku-dheellitirka ballaarinta kuleylka (K): 7.74 × 10-6
Kuleylka kuleylka (W / (M · K)): 21
10. Kuleylka sameynta (kJ / mol): -183.4
1. Qalabka isku dhafan: dhoobada carbide Titanium waa qalab qalab adag oo adag. TiC waxaa laga samayn karaa qalab dhoobada kala duwan oo isku dhafan oo leh TiN, WC, Al2O3 iyo qalab kale oo ceeriin ah. Titanium carbide dhoobada waxaa loo isticmaalaa wareegga hagaha siligga xawaaraha sare leh iyo jarista birta kaarboonka maxaa yeelay ma keento in bilaha la xirto biraha oo wuxuu leeyahay caabbinta qiiqa wanaagsan. Qalabka goynta dhoobada isku dhafan oo ay ku jiraan titanium carbide si ballaaran ayaa loo isticmaalay.
2. Waxyaabaha dahaadhka: Carbide Titanium maadaama dusha sare ay tahay walxo u adkaysta xoqidda. Qaar ka mid ah carbides xoog leh ayaa lagu dhejiyaa dusha dheemanka habab jireed ama kiimiko ah si loo sameeyo biro ama alloys. Birahan ama alwaaxyadu waxay la falgeli karaan atomyada kaarboon dusha sare ee dheeman si ay u sameeyaan carbides deggan. Carbides-kani si fiican ugama xidhi karo oo keliya dheeman, laakiin sidoo kale waxaa si fiican u dhex geli kara birta matrixka, si kor loogu qaado isku-xidhka u dhexeeya dheeman iyo birta matrixka. Nolosha adeegga cutter-ka waxaa lagu kordhin karaa dhowr jeer iyadoo lagu ridayo filim khafiif ah titanium carbide-ka.
3. Daraasada ku saabsan falsafadda isku-darka nukliyeerka, lakabka permeable-u-adkaysiga u-adkaysiga tritium-ka ee lagu sameeyay dusha sare ee walxaha dahaadhka carbide ee titanium iyo (TiN + TiC) maaddada isku-dhafka ah ee isku-dhafan ka dib daaweynta kuleylka kiimikada ayaa iska caabin kara shucaaca ion hydrogen, heerkulka heerkulka iyo wareegga kuleylka.
4. Intaas waxaa sii dheer, titanium carbide sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo dhaldhalaalka daaqada tin, lead, cadmium, zinc iyo biraha kale; Dhoobada carbide titanium Transparent sidoo kale waa shey indhaha wanaagsan.
Hore: Molybdenum Carbide Powder, Mo2C
Xiga: Budada Carbide Manganese, Mn3C
budada titanium carbide
Warshadaha budada titanium carbide
titanium carbide Factory
Soosaarahan budada titanium carbide
Soosaarayaasha budada titanium carbide
Titanium carbide budada Qiimaha
Wareegyada budada titanium carbide